Semalt: कसरी Google एनालिटिक्स मा ब्ल्याकहटवर्थ रेफरर स्पामबाट छुटकारा पाउने
Semalt: कसरी Google विश्लेषकमा ब्ल्याकहट वर्थ रेफरर स्पामबाट छुटकारा पाउने
ती मानिसहरू, जसले रेफरल स्पाम के हो भनेर जान्दछन्, जब यो तपाईंको गुगल एनालिटिक्समा पर्दछ कति निराश हुन्छन्। रेफरल स्पाम घुसाउने GA रिपोर्टहरूको चलन हालका बर्षहरूमा बढेको छ। यदि तपाइँ एक साइट मालिक हो भने, तपाइँले यससँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर जान्नु आवश्यक छ यसले तपाइँको व्यवसायमा परेको गम्भीर प्रभावहरूबाट बच्न।
ब्ल्याकहटवर्थ.कमान एक रेफरल स्पाम हो कि धेरै साइट मालिकहरू र प्रबन्धकहरूले टाउको कात्न खोजेका छन्। यो एक साइट हो जसले तपाईंलाई बोगस ट्राफिक वा "नकली हिट" पठाउँदछ र त्यसो गर्नुका कारणहरू भिन्न छन्। केहि रेफरल स्पामहरू तिनीहरूको साइटहरूमा आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले हो। उनीहरूलाई थाहा छ कि त्यहाँ साईटहरू छन् जुन उनीहरूको शीर्ष रेफररहरूको सूचि प्रकाशित गर्दछ। स्प्यामिंग साइटहरूले आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न आशा गर्दछ किनभने त्यस्ता सूचिहरूमा मात्र देखा पर्दछ। यी साइटहरू साइट प्रबन्धकहरूको जिज्ञासामा पनि बैंक। तिनीहरू आशा गर्छन् कि जब उनीहरूले तपाईंलाई स्पाम गर्छन्, तपाईंले जान्न चाहानुहुन्छ किन उनीहरू तपाईंसँग लिंक छन्। तपाईले तिनीहरूको साइट जाँच गर्न को लागी जानुहुन्छ, र वास्तवमै तिनीहरूलाई चाहिने कुरा छ - ट्राफिक।
ज्याक मिलर, Semalt का एक शीर्ष पेशेवर, यहाँ रेफरर स्पाम को यस प्रकारको छुटकारा को तरिकाहरू प्रकट गर्दछ।
के Blackhatworth.com रेफरल स्पाम हानिकारक छ?
जे होस् रेफरल स्प्याम हानिरहित लाग्न सक्छ किनकि यो मालवेयर फैलाउने जस्ता दुर्भावनापूर्ण कार्यहरूसँग सम्बन्धित छैन, यो गम्भीर मुद्दा हो किनकि यसले तपाईंको GA डाटालाई असर गर्दछ।
धेरै व्यक्तिको लागि, Google एनालिटिक्स निर्णय लिनका लागि एक उपकरण हो। तपाईको एनालिटिक्स डाटा तपाइँ साइटहरु लाई हेर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाइँलाई ट्राफिक पठाउँदै छ। त्यसोभए तपाइँ यस जानकारीलाई तपाइँको साइटको संरचना र सामग्री सुधार गर्नका साथै नयाँ लिंकहरू कसरी प्राप्त गर्ने भनेर रणनीति बनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईंसँग अन्य साइटहरूबाट वास्तविक, उच्च-गुणस्तरको लिंकहरू छन्, तपाईंको साइटलाई SERPs मा उच्च स्थानमा राख्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
रेफरल स्पाम द्वारा उत्पन्न समस्या यो हो कि यसले तपाइँको वेब एनालिटिक्स डेटा स्क्रू गर्दछ। तपाईको डाटा स्कइक छ र तपाईंको साइटमा निर्देशित ट्राफिकको सही मेट्रिक्स दिन असफल हुन्छ। यस गलत डाटा प्रयोग गरेर गरिएका निर्णयहरू उनीहरूलाई व्यवसायका लागि उपयोगी भन्दा बढी हानिकारक हुन सक्दछन्। दुर्भाग्यवश, जो व्यक्ति रेफरल स्पामको बारेमा सजग छैनन् उनीहरूले त्यसो गर्छन् र पछि उनीहरूको SEO रणनीतिहरू अपेक्षित जस्तो कार्य नगरेकोमा छक्क पर्दछन्।
गुगल एनालिटिक्सबाट ब्ल्याकहटवर्थ.क. रेफरल स्पामबाट छुटकारा पाउन
GA मा रेफरल स्प्यामका लागि फिल्टर सेट अप स्प्यामिंग साइटहरूबाट गलत ट्र्याफिकबाट छुटकारा पाउनको एक प्रभावकारी तरीका हो। फिल्टरहरूले साइटहरूको ख्याल राख्छन् जुन सीधा GA मा नक्कली ट्राफिक पठाउँदछ साथै तपाईंको साइट भ्रमण गर्न बोट प्रयोग गर्नेहरूलाई।
तपाईंको GA खातामा साईन ईन गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् ड्रप-डाउनमा, नयाँ दृश्य सिर्जना गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई नाम दिनुहोस्।
फिल्टरहरू> नयाँ फिल्टर क्लिक गरेर नयाँ फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस्। नयाँ फिल्टरको नाम दिनुहोस् 'कालाहटवर्थ.कमान् राम्रो छ'।
कस्टम फिल्टर प्रकार छनौट गरेपछि, बहिष्कार क्लिक गर्नुहोस् र फिल्टर फिल्ड ड्रप-डाउन रेफरल छनौट गर्नुहोस्।
फिल्टर पैटर्न फाँटमा, ब्ल्याकहटवर्थ com .com प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईंको सेटिंग्स बचत गर्नुहोस्।
तपाइँ कुनै अन्य स्पाम रेफरलको लागि यो गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको GA रिपोर्टहरूमा देखा पर्न सक्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कुनै पनि डोमेन फिल्टर गर्नु अघि तपाईले प्रमाणित गर्न जाँच गर्नुभयो कि यो वास्तवमा स्पाम रेफर हो। तपाईं वास्तविक साइटहरू फिल्टर गर्न र गल्तीले वास्तविक ट्राफिक गुमाउन चाहनुहुन्न।